Geosynthetic ရွှံ့စေးကှနျ့ GCL ရောင်းချ
Geosynthetic ရွှံ့စေးကှနျ့ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက် Specification 1. GCL အလေးချိန်: 300GSM - 6000GSM 2. GCL အကျယ်: မက်6မီတာ 3. GCL အလျား: တောင်းဆိုမှုကို 4. GCL အမျိုးအစားအမျှ: PE Geomembrane အတူသို့မဟုတ် 5. GCL အလွှာမရှိရင်: ပထမဦးဆုံးအလွှာ - ယက် Geotextile ဒုတိယအလှာ - တိုးချဲ့ bentonite တတိယအလွှာ - မဟုတ်သောယက် Geotextile စတုတ္ထအလွှာ - PE Geomembrane သို့မဟုတ် 6. Loading မရှိရင်: 20ft ကွန်တိန်နာ, 40ft ကွန်တိန်နာ 7. အခမဲ့နမူနာ, Fast Delivery အချိန် 8. အထုပ်: သံမဏိသတ္တု core ကို, PE အမြှေးပါး, ယက် PE Geomembrane နှင့်အတူထည်ဖျေါပွခကျြ Geosynthetic ရွှံ့ကှနျ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပ်တဲ့ဟိုက်ဒရောလစ်အတားအဆီးဖွဲ့စည်းရန်သဘာဝအဆိုဒီယမ် bentonite ရွှံ့တစ်ယူနီဖောင်း core ကိုနှစ်ခုအကြမ်းခံ geotextile ပြင်အလွှာပေါင်းစပ်ထားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားဖြည့်ဖွဲ့စည်းမှုလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ဖြစ်ကြသည်။ non-ယက် geotextile ကနေအမျှင်အပ် bentonite ၏ layer မှတဆင့်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်များနှင့်အတူအနိမ့် permeability ရွှံ့အလွှာဖွဲ့စည်းရန်အခြား geotextile (တစ်ခုခုကိုတစ်ယက်သို့မဟုတ် Non-ယက် geotextile) ဖြင့်တစ်ဦးဘာလို့လဲဆိုတော့ဝန်အောက်မှာ hydrated, အ bentonite ရောင်ရမ်းခြင်းသို့ထည့်သွင်းထားပါသည် Compact ရွှံ့အတော်ကြာခြေညီမျှဟိုက်ဒရောလစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ဆိုဒီယမ် bentonite granules အဓိကအားဖြင့်ရေစိုခံဘို့အခါစိုစွတ်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတိုးချဲ့နှင့်မြင့်မားသောရေစုပ်ယူစွမ်းရည်နှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌ကသဘာဝရွှံ့အော်ဂဲနစ်ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများအနိမ့် permeability ပါဝင်ပါသည်။
Composite Geomembrane Geotextile ရောင်းချ
ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.geosynthetic.biz Geocomposite Geomembrane ဖျေါပွခကျြ HUATAO geocomposite geomembrane နှင့် geotextile, စူပါကျယ်ပြန့်ပေါင်းစပ် geomembrane တဦးတည်းအနေဖြင့်ဖန်ဆင်းသောပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဘူမိ geotextile နှင့် macromolecule ပစ္စည်းများအဖြစ်ပစ္စည်းများထက်ပိုမိုနှစ်မျိုး, (PE geomembrane, နဲ့ Eva) နှင့်ဒါပေါ်မှာ။ အဆိုပါစုပေါငျး geomembrane အပူ-ဒြပ်ပေါင်းများ၏အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကဖန်ဆင်းသည်။ ပြက္ခဒိန်နှင့်အပူပန်းချီမှတဆင့် impervious အလွှာအဖြစ်ရေမြောင်းသောအလွှာများနှင့် macromolecule ပစ္စည်းများအဖြစ် geotextile ယူခြင်း, အထူး impervious, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဖြစ်တယ်, seperation function ကို, ဒါဟာသူ့ရဲ့ခိုင်မာခြင်းအဘို့အပိုပြီးလျှောက်လွှာနယ်ပယ်, အသံချေးနှင့်အတူဆောက်လုပ်ရေးမှတာအဆင်ပြေတတ်၏ ခုခံရေးနှင့်ဆန့်ကျင်အိုမင်းရိုးရှင်းစွာလျှောက်ထားအထည်သို့မဟုတ်အမြှေးပါးများ၏ခွဲတမ်းထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ကြသည်။ specification 1. အကျယ်: မက်6မီတာ 2. ရှည်: အဓိက Fiber & အဆက်မပြတ်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ nonwoven Geotextile (80GSM - 1000GSM) 4. Geomembrane အမျိုးအစား: တောင်းဆိုမှုကို 3. Geotextile အမျိုးအစားအဖြစ် 0.1mm - 1.0mm (အဖြူရောင် & Black ကအရောင်)5။ Composite အမြှေးပါးအဘို့အရောငျ: Black / White က .... 6. အခမဲ့နမူနာ 7. အထုပ်: စက္ကူ Core, ရေစိုခံအမြှေးပါးများနှင့်ပလတ်စတစ်ယက်အထည်အလိပ် 8. Loading: 20Ft ကွန်တိန်နာ, 40Ft မြင့်မားတဲ့ကွန်တိန်နာ
polyester Geogrid ရောင်းချ
polyester geogrid ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.geosynthetic.biz အမြင့်ခွန်အားဝါ့ပ်ဖှဲ့ polyester Geogrid ဖျေါပွခကျြအမြင့်-အစှမျးသတ်တိ polyester geogrid တိုးမြှင့်အရည်အသွေးကို subgrade geotextile အလွှာအသစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, ကုန်ကြမ်းအဖြစ် High-အစှမျးသတ်တိ polyester ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ် polypropylene ဖိုင်ဘာများအသုံးပြုခြင်း နှစ်ကနေအထူးအပေါ်ယံပိုင်းကုသမှုနှင့်အတူအတိုင်ဦးတည်ချက်ကတဆင့်ယက်ပစ္စည်း, ။ specification 1.Mesh Size: 12.7mm နှင့် 25.4mm ၏သမားရိုးကျ geogrid ကွက်အရွယ်အစား။ 2. အကျယ်:2မီလီယံ,4သန်းတန်နှင့်6လ။ သို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်ကိုအဖြစ်။ 3. သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်တောင်းဆိုမှုကို: geogrid ခွန်အားကို width နဲ့ကွက်အရွယ်အစားသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအရသိရသည်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ 4. Loading: 20ft ကွန်တိန်နာ, 40ft မြင့်မားတဲ့ကွန်တိန်နာစွမ်းဆောင်ရည်ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့ဆန့အစှမျးသတ်တိအနိမ့် elongated ချေးခုခံရှိပါတယ်, ခြေရင်းပစ္စည်းအိုမင်းနေတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကိုက်အင်အားသုံးအလင်းအလေးချိန်ရှိပါတယ်, ရေနုတ်မြောင်းရှိ
ဖန်မျှင်ထည် Geogrid ရောင်းချ
ကတ္တရာ Reinforment ဖန်မျှင်ထည် Geogrid ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.geosynthetic.biz ဖျေါပွခကျြဖန်မျှင်ထည်ဆန်ခါအရည်အသွေးမြင့်မြှင့်တင်ရန်, E-ဖန်ဖိုင်ဘာကြိုး, အတိုင် directional ဖွဲ့စည်းပုံမှာသုံးပြီးအလွှာသို့ယက်နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်အတိုင်များ၏အသုံးပြုမှု, ထည်အပြည့်အဝအသုံးဖန်ဆင်းထားသည် လေယာဉ် network-တူသောပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်ကြိုးအစွမ်းသတ္တိကိုက၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိတိုးတက်လာဖို့, ကကောင်းတစ်ဦးဆန့ခွန်အားကိုမျက်ရည်အစှမျးသတ်တိနှငျ့ပုတ်ခုခံနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကတ္တရာအပေါ်ယံပိုင်းကုသမှုရှိပါတယ်။ ဘယ်ကတ္တရာအရောအနှောများက၎င်း၏ပေါင်းစပ်စွမ်းဆောင်ရည်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, အပြည့်အဝဖန်အလွှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်အလွှာဟာအလွန် wear ခုခံနှင့်ညှပ်ခုခံတိုးတက်သည် Compatibility ကိုအလားတူအခြေခံမူကိုလိုက်နာလမ်းတိုးမြှင့်, ခုခံလမ်းများနှင့်အခြားရောဂါများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အက်ကြောင်းမြိုင်ထုတ်လုပ်ရန်, ကတ္တရာခင်းအဆုံးသတ်ပြဿနာကိုမြှင့်တင်ရန်ခက်ခဲသည်။ specification 1. mesh Size: 12.7mm နှင့် 25.4mm ၏သမားရိုးကျ geogrid ကွက်အရွယ်အစား။ 2. အကျယ်:2မီလီယံ,4သန်းတန်နှင့်6လ။ သို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်ကိုအဖြစ်။ 3. geogrid ခွန်အားကို width နဲ့ကွက်အရွယ်အစားအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကို 4. Loading အဆိုအရစိတ်ကြိုက်ခံရနိုင်သည် 20ft ကွန်တိန်နာ, 40ft မြင့်မားတဲ့ကွန်တိန်နာ
Flat ချည်ခင်ယက် Geotextile ရောင်းချ
ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှဝက်ဘ်ဆိုက်: PP (polypropylene) သို့မဟုတ်ပေကနေဖန်ဆင်း www.geosynthetic.biz ဖျေါပွခကျြ (polyester) စက်ဝိုင်းရက်စက်ပေါ်ပြားချပ်ချပ်ကြိုး။ ဒါကြောင့်အပေါ် 2.Separation, စစ်ကူ, Draginage, Filtration, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဓားရေးပြိုင်ပွဲ function ကိုများနှင့်တည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူအိမ်ခြံမြေ 1.Light အလေးချိန်မြင့်မားအစွမ်းသတ္တိကိုအနိမ့် elongated, customers'request အဖြစ် specification 1. 1-6m အကျယ်, အရှည်။ လျှောက်လွှာ 1.It ဒါပေါ်မှာရထားလမ်း, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, အားကစားနယ်ပယ်စပ်စီမံကိန်းများ, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ကျောက်မီးသွေးမိုင်း, မြို့ရိုး, ဆင်ခြေလျှောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဧရိယာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 2.It ဘူမိစီမံကိန်းများကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ဤကဲ့သို့သော Filtration, Separation, စစ်ကူ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်နှင့်ဒါ function ကိုအပေါ်လိုအပ်ပါတယ်
နန်းကြိုးအမျှင်လေးများယက် Geotextile ရောင်းချ
ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှ Limilted ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.geosynthetic.biz ဖျေါပွခကျြအမြင့်အစှမျးသတ်တိစက်မှုဇုန်ဒြပ်ဖိုင်ဘာ6လအတွင်းယက်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ Specification အကျယ်တဆင့်ရာ၌ကုန်ကြမ်း, ဖောက်သည်များ '' တောင်းဆိုမှုကိုအိမ်ခြံမြေ 1.High တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဖြစ်အရှည်, အနိမ့်ပုံပျက်သော & elongated 2.Durability အဖြစ် : တည်ငြိမ်အိမ်ခြံမြေ, ပြေလည်ရန်လွယ်ကူမဟုတ်, လေ slaked နှင့်မူရင်းအိမ်ခြံမြေရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ 3.Anti-တိုက်စားမှု, Anti-အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီ, reisstance အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်မှို 4.Permeability: အချို့သော permeability လျှောက်လွှာ 1.It ရဲ့ကျယ်ပြန့်မြစ်များတွင်အသုံးပြု, ကုန်ကျစရိတ်, ဆိပ်ကမ်း, မြင့်မား, ရထားလမ်း, ကားလမ်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန်ခါအရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း, လေဆိပ်, ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ခံတံတား, တံတား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်အခြားဘူမိအင်ဂျင်နီယာ။ 2.It ဘူမိစီမံကိန်းများကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ဤကဲ့သို့သော Filtration, Separation, စစ်ကူ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်နှင့်ဒါ function ကိုအပေါ်လိုအပ်ပါသည်။
PP spunbonded nonwoven geotextile ထည်ရောင်းချ
ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.geosynthetic.biz ဖျေါပွခကျြ HUATAO Nonwoven geotextile 100% polypropylene စဉ်ဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုးမျှင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရေ permeable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ကနဦးကိန်းပကတိတန်ဖိုးနှင့်မြင့်မားသော elongated ပေါင်းစပ်နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကတပ်ဆင်စဉ်နှင့်အပြီးကိုပျက်စီးစေမယ့်ခုခံတွန်းလှန်ပေးသည်။ ဒီအမျိုးအစား geotextile ကြောင့်ခွဲခြာနှင့် filtration လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြည့်ကျသောအင်ဂျင်နီယာအဆောက်အဦများနှင့်တပ်ဆင်၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းများအတွက်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, ဒေါင်လိုက်နှင့်အတူတူပင်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအလျားလိုက်နှင့်အတူ nonwoven geotextile ။ ကျယ်ပြန့်လမ်း, အဝေးပြေး, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း, ရေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စီမံကိန်း (ဆည်များ, levee စသည်တို့), ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလျှောက်လွှာအတွက်သုံးပါ။ အိမ်ခြံမြေ - PP အဆက်မပြတ်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ Nonwoven Geotextile 1. polypropylene သိပ်သည်းဆ သာ. ကြီးမြတ်လွှမ်းခြုံနှင့်အတူ, တူညီတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုနှိုင်းယှဉ်သေးငယ်တဲ့, ဒါကြောင့် polypropylene geotextile နှင့် polyester geotextile ဖြစ်ပါတယ်။ 2. polypropylene စဉ်ဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုး geotextile ၏အထူးဖွဲ့စည်းပုံမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံ, အထူးသဖြင့်အယ်လကာလီခုခံ polyester ပစ္စည်း geotextile ထက် သာ. ကောင်း၏သိရသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြေဆီလွှာအက်ဆစ်-အခြေစိုက်စခန်းအားကြီးသော undersground ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အားဖြည့်, ရေစိုခံတာ, seepage, sepatation နှင့်အခြားစီမံကိန်းကြီးများအတွက် pulyester whrn အသုံးပြုမှုထက် သာ. ကောင်း၏။ 3.Polypropylene အဆက်မပြတ်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ Geotextile polyester ထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်းထဲတွင်ကောင်းသော hydrophobic non-စုပ်ရှိပါတယ်။ 4. polypropylene ဖိုင်ဘာမျက်နှာပြင်ပွတ်တိုက်ကိန်းသေးငယ်သည်, ထိုအမျှင်ဓာတ်အကြားပွတ်တိုက်အားသေးငယ်သည်, ကောင်းသော wear ခုခံရှိပါတယ်, Anti-တုန်ခါမှုပွတ်တိုက်အားစွမ်းဆောင်ရည်။
ပေမဟုတ်သောရက်ထည် spunbonded ရောင်းချ
ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်: ကညာပေ (polyester) ချစ်ပ်ကနေဖန်ဆင်း www.geosynthetic.biz ဖျေါပွခကျြ, အဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုး spunbond ဖြစ်စဉ်ကိုတိုက်ရိုက်စက်အားဖြင့်ပေ chip ကိုထံမှ extruded ခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့ဆေးထိုးအပ်မြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအားဖြင့် 3D ရဖို့အတူတူလာကြတယ် fabrc ။ specification 1. အလေးချိန်အမျိုးအစား: 80GSM - 1000GSM 2. အကျယ်: မက်6မီတာ, တောင်းဆိုချက်ကို 3. အရောင်အဖြစ်တာရှည်သကဲ့သို့အပေါ်အဖြူ, အနက်ရောင်, Gray, အစိမ်းရောင်, ဘရောင်းနှင့်။ 4. အထုပ်: စက္ကူ core ကိုရေစိုခံအမြှေးပါးနှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်။ 5. Loading အသေးစိတ်ကို: 20ft ကွန်တိန်နာ, 40ft အမြင့်ကွန်တိန်နာ။ အိမ်ခြံမြေ 1.High ခွန်အားကောင်းသောပုတ်အိမ်ခြံမြေ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိုက်စားမှုခုခံ, အိုမင်း-ခုခံနှင့်အပူခုခံ 2.Separation, filtration, ရေနုတ်မြောင်း, အားဖြည့်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု function ကိုလျှောက်လွှာဒါဟာကျယ်ပြန့်လူထုအခြေပြုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သောရထားလမ်း, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, လမ်း, ဖို့မြေ, အားကစားရုံ, သေားကို, အဏ္ဏဝါအကျင့်ကိုကျင့်, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ဒီရေပြားချပ်ချပ်, ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းများအဖြစ်။ သူတို့ကကိုအသုံးပြုဖို့ပါဝင်သည်: တိုက်စားမှုထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများအတွက် 4. ခေါငျးအုံးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်လမ်းနှင့်ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရေ 2. Separation နှင့်တည်ငြိမ်၏လွတ်လပ်သောစီးဆင်းမှုဘို့ခွင့်ပြုနေချိန်တွင်မြေဆီလွှာများမှုန်ဆက်ပြီးအားဖြင့်ရေနုတ်မြောင်း applications များအတွက်မြေဆီလွှာများ၏ 1. Filtration သောမြေဆီလွှာလှုပ်ရှားမှု၏ 3. ကာကွယ်ခြင်း အများအပြားထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းများ
PP မဟုတ်တဲ့ယက် geotextile ထည်ရောင်းချ
ကုမ္ပဏီ: Huatao Group မှလီမိတက်ဝက်ဘ်ဆိုက်: nonwoven အပ်ခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ PP (polypropylene) တိုတောင်းသောဖိုင်ဘာကနေဖန်ဆင်း www.geosynthetic.biz ဖျေါပွခကျြကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်။ အဆိုပါစက်မှုတန်ဖိုးများကိုသာမန်ထုတ်ကုန်ထက်2-3 ဆပိုဖြစ်ကြသည်။ specification 1. အလေးချိန်အမျိုးအစား: 80GSM - 1500GSM 2. အကျယ်: မက်6မီတာ, တောင်းဆိုချက်ကို 3.Color အဖြစ်တာရှည်သကဲ့သို့အပေါ်အဖြူ, အနက်ရောင်, Gray, အစိမ်းရောင်, ဘရောင်းနှင့်။ 4.Package: စက္ကူ core ကိုရေစိုခံအမြှေးပါးနှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်။ အသေးစိတ်ကို 5.Loading: 20ft ကွန်တိန်နာ, 40ft အမြင့်ကွန်တိန်နာ။ အိမ်ခြံမြေ 1.Good အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပူအရည်ပျော်ကော်မြင့်မား Anti-ပွန်းပဲ့စွမ်းဆောင်ရည် 2. Separation, filtration, ရေနုတ်မြောင်း, အားဖြည့်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု function ကိုလျှောက်လွှာမဟုတ်သောယက် geotextiles အရပ်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် applications များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိသည် စီမံကိန်းများ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ရထားလမ်း, ကားလမ်း, ဖို့မြေ, အားကစားရုံ, သေားကို, အဏ္ဏဝါအကျင့်ကိုကျင့်, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ဒီရေပြားချပ်ချပ်, r ကို eclamation နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကကိုအသုံးပြုဖို့ပါဝင်သည် in: 4.Cushioning နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတိုက်စားမှုထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများအတွက်မြေဆီလွှာတွင်လှုပ်ရှားမှု၏လမ်းနှင့်ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရေ 2.Separation နှင့်တည်ငြိမ်၏လွတ်လပ်သောစီးဆင်းမှုဘို့ခွင့်ပြုနေချိန်တွင်မြေဆီလွှာများမှုန်ဆက်ပြီးအားဖြင့်ရေနုတ်မြောင်း applications များအတွက်မြေဆီလွှာများ၏ 1. Filtration 3.Prevention အများအပြားထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းများ